Ukhala ezimathonsi "oqolwa" nguKhuzani - Ilanga News
Home Izindaba Ukhala ezimathonsi “oqolwa” nguKhuzani
Ukhala ezimathonsi “oqolwa” nguKhuzani
Indlamlenze ithi abasenzanga isivumelwano sokukhokhelana
SEKUQUBUKE umdonsi-swano phakathi komculi kamasikandi, uKhuzani “iNdlamlenze” Mpungose (osesithombeni) nembongi yaKwa-Nongoma ekhala ngokuthi uyixha-phazile, wayisebenzisela ubala kwezinye zezingoma zakhe ezikwi-albhamu ethi “Inyoni Yomthaka-thi” eyaphuma ngo-2016.
UMcebisi “MP Mkhize Da Bee” Mkhize, uthi usebenzele ubala engomeni kaKhuzani ethi “Iso Lami”. Utshele ILANGA ukuthi akatholanga ngisho indibilishi ngakwenzile kule ngoma ehasha iNdlamlenze edabuka eNkandla.
Lo mdonsiswano ususabalele nasezinkundleni zokuxhumana njengoba la maciko eseqophisana ngamazwi nakuzona. “UKhuzani ungugombela kwesakhe, indlela enza ngayo kayikhombisi ukuthi uyakwazi ukuhlupheka. Ngifone-lwe nguyena eya e-studio ethi
“Bekumele ngisuke eThekwini ngiye eGoli, ngagibela ngemali yami, kodwa akakaze anginikeze lutho. Ubeziqhakambisa njengo-mfana othobile, okhulele emakhaya nobazisayo abantu, kodwa sekucacile ukuthi le nto azenza yona, akayona. Ngingasuka eThekwini ngiyosebenzela ubala eGoli!
“Bengithule sonke lesi sikhathi ngilokhu ngifela ngaphakathi ngoba bengibona ukuthi kuzothiwa ngifuna udumo ngaye. IGcokama Elisha leli elingafunwa ezweni, ngiyalincamela,” kusho uMP Mkhize Da Bee. Uthi lo msebenzi wobumbongi uziphilisa ngawo, ufuna u-R20 000 kuKhuzani ngakwenze engomeni yakhe nokuthi wasuka eThekwini eya eGoli beyosebenza.
“UKhuzani ubenabukeliswa yiNdidane (Mtshengiseni Gcwensa) ukuze abe sebalazweni, yiyona ebilokhu isitshela ngaye, namhlanje uma sikhuluma ngokuganga kwakhe, uthi kufunwa udumo ngaye, akasabazi abantu abamsizile. Le ngoma yakhe idume kakhulu nje, kungenxa
“Nginomndeni njengaye, kumele ngikhokhelwe njengoba naye eziphilisa ngawo umculo. Le nto ayenzayo kufana nokunyathela umsebenzi wami. Uma engangi-khokheli, ngiyaphoqeleka ukuba ngithathe izinyathelo zomthetho,” kusho uMP Mkhize Da Bee.
Ethintwa uKhuzani, uthe kasi-kho isivumelwano sokukhokhelana asenza nale mbongi. Uthe yiyona eyamfonela icela ukusebenza naye.
“Ngangingasabulali ubuthongo le mbongi ingifonela ubusuku nemini izicelela ukungena kwi-albhamu yami ngoba ithi ifuna ukukhulisa igama layo ngami. Kwezinye zezinto ebizibalula wukuthi kunamadlelo aluhlaza ewatholile okuya phesheya, ifuna igama layo libe sebalazweni
“Kangikaze ngiyiqashe, yiyona eyazicelela ngoba ithi mina sengiyaziwa. Bengizomkhokhela kanjani umuntu ebengingamdingi? Ngimnikeze ithuba ngoba sengimenzela umusa, ngamnikeza imizuzwana ewu-30 engomeni yami. Nangonyaka ophelile ubengicela, efuna ukusebenza nami. Uma bengingenzi kahle, kungani
ephinde wacela ukusebenza nami?” kubuza uKhuzani.
Isazi sezomculo, uMnu Tshepo Nzimande weZuz’muzi Music Production, sithe womabili la maciko asephutheni, bekungamele imbongi iqale umsebenzi singekho isivumelwano esibhaliwe mayelana nohlelo okuzosetshenzelwa phezu kwalo. Sithe kodwa ngokomthetho womculo kumele uKhuzani amkhokhele uMP Mkhize da Bee.
“Enkantolo ingaphuma phambili imbongi ngoba likhona iphimbo layo kule ngoma. Inkantolo ingaze ibheke nokuthi le albhamu yenze imali engakanani, aphoqwe uKhuzani ukukhokha nenzuzo ngaphezulu ngoba uma umuntu esebenzi-le, uyakhokhelwa ngokwemithetho ebhaliwe.
“Sinenkinga kakhulu emculweni yokuthi abantu abamnyama bavuka umbhejazane uma sebebona ingoma idla ubhedu ekubeni besi-ngekho isivumelwano ngaleso sikhathi sokuba kumele kukho-khelwane,” kusho uMnu Nzimande.
Sekuwumlando ukuthi uKhuzani uqophe umlando emacikweni aKwaZulu-Natal ewonke eba ngumculi wokuqala kamaskandi ukuthatha amashansi okugcwalisa iMoses Mabhida Stadium,
Nguyena mculi kamaskandi ovame ukubonakala elandelwa yizinkumbi zabalandeli abavatha ngezi-blue, abateketiswa ngeBlue Nation.
Previous articleIsilo sibona impi ebhekiswe kuZulu
Next articleBanxuswe ukungachomi abebafana